Pakistana :Resy Indray Ny Maha-Olona, Kristiana Maherin’ny 80 No Maty · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Oktobra 2013 14:25 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, বাংলা, Français, русский, Español, English
Hetsiky ny Kristiana any Hyderabad taorian'ny fipoahana baomba tany Peshawar. Sary avy amin'i Rajput Yasir. Fizakà-manana Demotix (22/9/2013)
Mpametraka baomba mpanao vy very ny ainy niisa roa no nanapoaka ny tenany tamin'ny baomba tao anatin'ilay fiangonana 130 taona tany Peshawar taorian'ny fotoam-pivavahana Alahady. Navoakan'ny gazety mpiseho isan'andro Daily Dawn fa olona maherin'ny 80 no maty tamin'iny fanafihana mampihorohoro iny.
Tandindonin-doza efa an-taona maro ireo vitsy an'isa any Pakistana. Nilaza ho tompon'antoka tamin'iny fanafihana tamin'ny alahady iny ny Jundullah sampan'ny Pakistani Taliban ary izao no nolazain'ny mpitondrateny iray :
Fahavalon'ny Silamo ry zareo (Kristiana), izany no antony nikendrenay azy. Mbola hotohizanay ny fanafihana ny tsy Silamo eto amin'ny tanin'ny Pakistane.
Tany amin'ny tanànan'i Gojra any amin'ny faritanin'i Punjab tamin'ny 2009, nandoro trano 77 sy namono Kristiana valo ny silamo taorian'ny tsaho fa voazimbazimba ny dika mitovin'ny boky masin'ny Silamo, ny Koroany (jereo ny lahatsoratry ny GV). Tranga iray hafa tamin'ny volana Aogositra 2012 dia zazavavy Kristiana, i Rimsha Masih, no nosamborin'ny mpitandro filaminana sy mety ho voaheloka ho faty araka ny lalàna Pakistane momba ny fanimbazimbana noho ny nanimbazimbany pejy maro tao amin'ny Koroany.
Araka ny tatitra tamin'ny 2011 nataon'ny Komisiona Amerikana momba ny Fahalalahana Ara-pinoana Iraisan'izao tontolo izao, dia lasibatra ny vitsy an'isa ao Pakistana. Efa navoakan'ny USCRIF ihany koa ny fandaharam-potoana hanafihana ny Kristiana ao amin'ny firenena nandritra ny folo taona lasa.
Ny governemanta Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) no miasa any Peshawar (faritanin'ny KPK ). Notohanan'ny filohan'ny PTI, i Imran khan, ny fifampidinihina tamin'ny Taliban,saingy taorian'iny fanafihana ny faritany tena mpanome vato ny PTI iny dia mety hitsahatra ny fifampiraharahana.
Mihidy ny tsena noho ny hatezerana taorian'ny fanapoahana fiangonana tany Peshawar. Sary avy amin'i Rajput Yasir. Fizakà-manana Demotix (23/9/2013)
Mafy ny tenin'ny olona tao amin'ny haino aman-jery sosialy momba ilay fanafihana fiangonana.
Nosoratan'i Kristina Yn tao amin'ny Bilaogy Let Us Build Pakistan (LubPak) (Ndeha isika hanorina an'i Pakistana), tao amin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe : Ny meloka Tamin'ny Fanapoahana Fiangonana Tamin'ny Baomba Tany Peshawar: ny Taliban sa Isika ?
Isaky ny manameloka asa fampihorohoroana tahaka izao ao amin'ny haino aman-jery sosialy aho, ny valinteny mavesatra voaraiko dia ny hoe manala baraka an'i Pakistana aho. Tsy tia Pakistane aho. Ary ny tena lehibe indrindra dia mpanohitra ny Silamo aho. Tohina aho nahita ireo tena namako izay nahafantatra ahy nandritra ny fotoana maro nilaza izany tamiko satria nijoro hiaro ny fahamarinana sy ny fitoviana amin'ny samy olona aho, eny hatramin'ireo mpiray firenena amiko aza.
Nanoratra tao bilaogy American Thinker i Rick Moran :
Afaka miaro bebe kokoa ireo Kristiana, Shia, ary ireo antokom-pinoana hafa ve ny governemanta Pakistane ? Eny, afaka izy. Malaza amin'ny filazàna fanohanana ny firaisam-pinoana ry zareo, nefa rehefa tonga ny fotoana tony hanaporofoany ny fa piharany ny fahalalahana ara-pinoana, manipy baolina ry zareo. Toy ny tany Ejypta teo ambany fitondràn'ny Firahalahiana Silamo, lasa zava-poana ireo teny tsara momba ny fiarovana ny Kristiana noho ny nataon'ireo mpitory nanentana ny vahoaka hankahala ny Copts.
Izao no nobitsihin'ilay mpanao gazety Pakistane malaza , ny Dr Shahid Masood (@Shahidmasooddr) :
Tsy maintsy velesintsika amin'ny vy ireo mpampihorohoro NEFA Tokony Hitohy ny Fifampidinihina miaraka amin'ireo izay mila Filaminana ! #PeshawarChurchBlast
— Dr Shahid Masood (@Shahidmasooddr) 22 Septambra 2013
Nohanihanian'i Sadanand Dhume (@dhume), mpanoratra ao amin'ny WSJ, ny fotokevitry ny rain'ny firenena Jinnah. Novalian'i Tarek Fatah (@TarekFatah), mpikatroka mafàna fo sady mpanohitra ny Taliban ny tsikerany :
Sadanand Dhume ✔ @dhume
Jinnah: “Mlalaka ianareo mankany amin'ny fiangonanareo… na any amin'izay toerana hafa fanaovanareo fideràna.” [Ary malalaka koa ireo jihadis handaroka baomba anareo any.] #PeshawarChurchBlast
Nandainga i Jinnah ary fantany fa nandainga izy @dhume. Izy no tompon'andraikitra voalohany amin'ny firoboroboan'ny islamista tia tanindrazana manerantany amin'izao fotoana izao.
— Tarek Fatah (@TarekFatah) 22 Septambra 2013
I Mir Muhammad Ali Talpur (@mmatalpur), tonian-dahatsotry ny Daily Times sady Baloch tia tanindrazana dia nibitsika :
#PeshawarChurchBlast (#FanapoahanaFiangonanaPeshawar) dia manaporofo fa ao amin'io fanjakana #GarrisonState io no #Defeated #rotika ny #Humanity #Maha-olona. Meloka daholo na ny mpandray anjara na ireo mpiaro ny finoana silamo #Guilty.
— Mohammad Ali Talpur (@mmatalpur) 22 Septambra 2013
Ireo Kristiana nanomboka nihetsika manohitra ilay fanafihana roa miaraka tao am-piangonana tany Peshwar renivohi-paritany. Sary avy amin'i Sultan Dogar. Fizakà-manana Demotix (23/9/2013)
I Buhran Chaudhry (@burhan_fawad), mpanao gazetin'ny Express News Pakistan dia niteny hoe :
Raha vonoina ny kristiana satria tsy silamo dia tokony ho vonoina ihany koa ny silamo satria tsy kristiana- rariny ho an'ny rehetra #PeshawarChurchBlast
— Burhan Chaudhry (@burhan_fawad) 23 Septambra 2013
Nobitsihan'i Fatima Aziz (@Fatie) tao amin'ny twitter fa:
Atao toy ny olona tsy ilaina, hankahalaina ao amin'ny taniny ireo Pakistane Kristiana dawn.com/news/1044837/protests-held-across-country … #PeshawarChurchBlast
— Fatima Aziz (@Fatie) 23 Septambra 2013
I Arbaaz butt (@ItsBazi), mpikambana ao amin'ny Fivondronan'ny Silamo Pakistane (N) dida nanoratra fa tsy noheveriny fa ny Taliban no nanafika tao am-piangonana :
Heveriko fa tsy ny Taliban no nanafika tany am-piangonana, fa angamba ireo vondrona Pakistane no nanao izany satria tsy mila fifampiraharahàna ry zareo. #PeshawarChurchBlast”
Nosoratan'i Anon Pak (@Anonpak) fa :
Tena mampihomehy, ahoana no ahafahan'ny silamo mamono ny mpiray firenena aminy ary ilazany izany ho valifaty noho ny fanafihana tamin'ny drone (karazana fiaramanidina tsy misy mpanamory). #PeshawarChurchBlast
Soratan'i Moin Warraich (@moinwarraich) ao amin'ny isan'oran'ny gazety Xia fa tsy mahavita miady amin'ny Talibana ny tafika Pakistane :
@Mavric_xia Tsy afaka miady amin'ireo Balouch tia tanindrazana tahaka ny fomba iadiany amin'ny silamo ny tafika Pak. Raha toa ka mandresy ianareo dia ovànareo ny fisainana. @H_Balouch
— Moin Warraich (@moinwarraich) 23 Septambra 2013
@moinwarraich Vitan'ny tafika Pakistane ny nanadio milisinà foko 6 sy mpiady nofanina manokana ho mpampihorohoro tany aminà Distrika, tatoanatin'ny 5 taona farany teo @H_Balouch
Nangataka ny hiarovana ireo Kristiana any amin'ireo tanàna maro any amin'ny faritanin'i Punjab any Pakistana i Fahad Khan (@MrFahadKhan), mpianatra ao amin'ny Oniversiten'i Iqra.
Nihetsika ihany koa ireo vondrona Kristiana any Bahawalpur, Gujranwala, Sahiwal, Mandi Bahuddin ary Hafizabad. #PeshawarChurchBlast
— Fahad Khan (@MrFahadKhan) 23 Septambra 2013
Nitsikera i Zarmina (@ZarminaF) :
Nanjary mena isan'andro isan'andro ilay fotsy tamin'ny saina Pakistane. Nakorontan'ny #PeshawarChurchBlast, karazana biby inona no ompiantsika ?
— Zarmina (@ZarminaF) 23 Septambra 2013
Nosoratan'i Aves -n'i Peshawar (@ZamanKheil) fa :
Tena helohiko tanteraka iny fihetsika mahamenatra nataon'ny mpampihorohoro omaly tany #PeshawarChurchBlast iny. Maty ireo Pakistane ary tokony hisaona azy ireny isika !!
— Aves (@ZamanKheil) 23 Septambra 2013
Nomelohin'ny Sekretera Jeneralin'ny Firenena Mikambana Ban Ki-moon, ny Filoha Afgana Hamid Karzai ary ny Komisiona Amerikana momba ny Fahalalahana Ara-pinoana Iraisan'izao tontolo izao iny fanafihana iny.